Waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato Semalt
Maanta, way adag tahay in la helo milkiile bog kaasoo aan maqli lahayn Semalt. Sababtoo ah qaab ama qaab kale, dadku waa inay wax ka qabtaan kobcinta SEO. Dhiirrigelinta websaydhka ee mashiinka raadinta ayaa noqonaya mowduuca looga wada hadlayo Semalt wuxuu naftiisa u aasaasay hoggaamiye u ah dhiirrigelinta websaydhka oo muddo toban sano ah caddaynaysay inay ka sarreeyaan aaggan.
Kuwani ma aha ereyo aan micno lahayn, xaqiiqooyinka oo dhan waxaa lagu xaqiijiyay tusaha tirada ee dhammaystirka mashaariicda guuleysta. Boqolaal macaamiil ah ayaa qoraan jawaab celin wanaagsan oo ku saabsan la shaqeynta sababtoo ah shirkadahooda ayaa ugu dambeyntii bilaabay inay horumar sameeyaan. Dhammaan tartamayaashii waxaa laga tagay meel aad u fog iyaga oo aan helin hal fursad oo ay ku qabtaan booskooda mashiinka raadinta. Way cadaatay in kobcinta SEO aysan macquul aheyn iyada oo aan la adeegsan Semalt, tani waa takhasuskeenna halkaas oo xirfadlayaal sarsare ay mas'uul ka yihiin. Ka sokow, ma haysanno waqti aan ku nasanno howlaheena, waxaan u hagaajinaa qaababkeenna maalin kasta annagoo macaamiisha siineyna tiknoolojiyad cusub oo SEO ah. Waannu isbeddelaynaa, oo ganacsigaaguna annaga nala kaashanayo.
Waa inaan abaalmarin siinaa kooxdeena, oo ka kooban maareeyayaal khibrad leh, khabiiro IT, khabiiro SEO ah, qorayaasha iyo maamulayaasha suuq geynta. Waxaan kuu xaqiijin karnaa isla markaaba, ma jirto meel loo helo dadka wax xiraya Semalt. Khabiir kasta wuxuu khibrad ballaaran u leeyahay kor u qaadista SEO-ga, kaasoo awood u leh inuu uga fikiro si istiraatiiji ah oo had iyo jeer diiradda u saaro guusha.
Fiiri kiisaska dhabta ah ee lagu soo bandhigay bartayada internetka. Waxaad ku garaaci doontaa tirada goobaha aan ka baxnay dhibaatooyin daran. Waxaan la shaqeynaa degel kasta oo waxaan ka badbaadineynaa burburka dhow. Laga yaabee, dad badan ayaa xiiseynaya farsamooyinka iyo mabda'a shaqadayada. Maqaalkani wuxuu kuu sheegi doonaa sida aan u maareyno inaan ku jirno dhamaadka sare, iyo sababta Semalt uu yahay shirkadda kaliya ee dammaanad qaada guushaaga.
Ereyga SEO waxaa loo isticmaalaa in lagu tilmaamo kobcinta websaydhka sababtoo ah shuruudaha matoorada raadinta. Tusaale ahaan, kadib marka la abuuro ilaha internetka ee loogu talagalay iibinta shay ama adeeg gaar ah, waxaa lagama maarmaan ah in la keeno macluumaad ku saabsan tirada ugu badan ee xubnaha dhagaystayaasha bartilmaameedka.
Xitaa isticmaaleyaasha raadinaya badeecadan ama adeegyadan oo kale ma arki doonaan natiijooyinka raadinta illaa websaydhku ku yaal bogagga hore ee mashiinka raadinta. Tan waxaad ku guuleysan kartaa kobcinta SEO. Sababta oo ah xaqiiqda ah in macaamiisha ay sii kordhayaan iibsashada alaabada iyo adeegyada internetka, ganacsiyada kasta waxay hadda ubaahan yihiin dardar galin baaris.
Dhamaan qaababka loo isticmaalo kor u qaadida SEO ee shabakada shabakada aduunka waxay u qaybsan tahay habab dibadeed iyo mid gudaha ah. Xaaladda koowaad, hawlgallada waxaa lagu fuliyaa iyadoo la adeegsanayo ilaha saddexaad ee qadka internetka, kan labaad - websaydhka. Ujeedada ugu weyn ee kobcinta dibedda ayaa ah in la daabaco waxa ku jira dibedda websaydhka shirkadda. Tani waxay bixisaa gaadiid badan iyo ilo la aqbali karo oo ah xiriiriyeyaasha websaydhka la dalacsiiyay, sidoo kale waxay gacan ka geysaneysaa hagaajinta jagooyinka mashiinka raadinta. Tilmaamaha ugu waaweyn ee noocan ah ee dalacsiinta:
Ku daabacida joornaalada iyo qodobada lagu qoro baraha internetka ee dadka kale.
Kordhinta SEO gudaha ee websaydhka waxaa ku jira noocyada shaqada ee soo socda:
abuurista waxyaabo gaar ah oo tayo sare leh;
xulashada ereyada furaha ah ee saxda ah isla markaana si dheellitiran qoraallada ugu dhajinta.
Waxa Semalt bixiso
Waxaan soo saarnay dhowr tillaabooyin looga golleeyahay kordhinta taraafikada bartaada iyo aragtidiisa. Labadan hawlood ee lama huraanka ah waxay qeexaan dallacsiinta SEO. Si kor loogu qaado waxqabadka wax-ku-hagaajinta, xalal u gaar ah ayaa la abuuray - AutoSEO iyo FullSEO. Kuwani waa ololeyaal gaar ah oo aad ku guuleysan karto natiijooyinka waqti aad u gaaban. Dheeraad ah, waan tixgelin doonnaa si buuxda, laakiin hadda aan fiiro gaarno waxa Semalt uu runtii sameynayo. Halkan waxaa ah soojeedintayada ugu weyn:
kobcinta mashiinka raadinta;
vidiyo xayeysiin ah ganacsigaaga.
Ololaha AutoSEO ee Semalt
AutoSEO waa dhowr tillaabood oo la qaaday si looga dhigo websaydhka booska ugu sarreeya mashiinka raadinta. Aad ayey muhiim u tahay in si sax ah loo fahmo habkan. Tani maahan wax sixir barar ah, laakiin ficilada ujeeddooyinka leh ee shirkadeena ku jira qaab dhismeedka SEO-optimization. Rumayso, jiritaanka digsi ma dammaanad qaadi karo maraq macaan, sidaa darteed shaqada waxaa ku biiray khubaro ku takhasustay noocyada kala duwan. Ololaha AutoSEO wuxuu noqon karaa mid wax soo saar leh keliya iyada oo loo marayo iskaashiga macaamiisha is dhexgalka ee kooxda Semalt. Waa tan waxa AutoSEO ka mid yahay:
xulashada badanaa ereyada muhiimka ah ee habboon;
wax ka badalida khaladaadka shabakada;
Haddaba samir oo arag sida ay u egtahay ficil ahaan. Waxay dhammaan ku bilaabataa is diiwaangelinta bartayada internetka. Marka xigta, wax walba waxaa sameeya falanqeeyaha bogga, kaas oo si taxadar leh u hubiya qaab dhismeedka websaydhka iyadoo loo eegayo heerarka SEO. Waxaad heleysaa dhammaan macluumaadka loo baahan yahay qaab warbixinnada leh liiska khaladaadka ay tahay in la hagaajiyo. Iyada oo ku saleysan falanqaynta, injineerka SEO ayaa go'aamiya ereyada muhiimka ah ee ku habboon kaas oo kordhin doona taraafikada ka soo qeybgalka bogga
Tallaabada xigta waa in la geliyo xiriirada internetka ee ilaha kala duwan ee internetka. Waxyaabaha ku jira waa inay isbarbar dhigaan isku xirnaanshaha ayna wataan qiimaha Semantic. Hawsha waxaa si joogto ah u kormeeraya maamulaheena, kaasoo raadiya booska xiriiriyaha mashiinka raadinta. Ma aha inaad walwal ka qabtid wax, wax walbaa waxay ku socdaan gacanta si buuxda ololaha. Kheyraadka iskuxirka khadka tooska ah waxaa lagu xushay saxnaansho aad u weyn, marka itimaalka galitaanka liistada lama huraanka ah waa laga saaray.
Helitaanka barnaamijka loo yaqaan 'FTP Transfer Protocol', khubarada Semalt waxay sameyaan isbeddelo qaarkood oo horay loogu soo bandhigay warbixinta websaydhka. Isbeddeladaani waxay horseed u yihiin nidaamka kobcinta shabakadda. Masuuliyada Semalt ee marxaladan waxaa ka mid ah casriyeynta heerka maalinlaha ah, iyadoo la soo bandhigayo ereyo cusub oo la jaan qaadaya waxa ku jira. Faa'iidada AutoSEO waa in ololaha lagu fuliyo iyada oo aan wax lug ah ku lahayn ama isticmaalin isticmaale, laakiin waxaad la socotaa wax kasta oo socda. Xidhmada bishiiba AutoSEO waa $ 99.
Waa maxay FullSEO
Si si wanaagsan loogu fahmo nidaamkan kobcinta SEO, waxaan kuusoo bandhigaynaa inaad naftaada ku barato nidaamka fullSEO, kuwaas oo sidoo kale loogu talagalay in lagu kordhiyo qiimeynta websaydhka mashiinka raadinta. Farqiga u dhexeeya AutoSEO waa in natiijada lagu gaaro waqti gaaban. Aasaaska waa kor u qaadida gudaha iyo dibedda, oo ay ku shaqeeyaan khabiiro SEO ah. Natiijo ahaan, ololaha FullSEO wuxuu u oggolaanayaa ma aha oo keliya inuu door hoggaamineed ka qaato qaybta suuqa, laakiin sidoo kale wuxuu ku riixayaa tartamayaasha meel fog.
Astaamaha ololaha FullSEO
Ololaha FullSEO wuxuu ka bilowdaa waqtiga aad is qorto. Falanqayn dhameystiran oo ku saabsan qaab dhismeedka websaydhada ayaa la sameeyaa, iyadoo la soo saaray warbixin dambe. Marka xigta, khabiir SEO ayaa sameeya qaraar Semantic ah boggaaga, wuxuu hubiyaa qaabeynta wuxuuna cadeeyaa xudunta aasaasiga ah. Falanqaynta ka dib, dhammaan khaladaadka u baahan in la saxo si horumar dheeri ah loo helo ayaa la aqoonsaday. Markaa waa loo jeedo si loo qeexo ereyada muhiimka ah si loo kordhiyo taraafikada. Sidaas darteed, goobta ayaa si heer sare ah looga habeeyay dhammaan heerarka. Kadib helitaanka FTP, khabiirka ayaa sameyn doona isbeddelada lagama maarmaanka ah ee lagu cayimay warbixinta.
Tallaabada kale waxay noqon doontaa kor-u qaadista dibedda. Xirfad-yaqaannada SEO-gu waxay geli doonaan xiriiriyeyaasha ilaha ugu wanaagsan ee ka tarjumaya nuxurka nuxurkaaga. Waqti kadib, xiriiriyeyaashani waxay bilaabi doonaan inay natiijo wax ku ool ah u keenaan websaydhka. Xisaabta Semalt, waxaa jira tiro aad u badan oo bogag la xaqiijiyey oo aad waxsoosaarka ula shaqeyn karto, dhammaantoodna waxtarka u leh kobcinta guusha boggaaga. Ololaha fullSEO sidoo kale wuxuu ku socdaa kormeerka joogtada ah ee takhasuska, waxaa jira waqtiyo cusboonaysiin ah oo ereyada muhiimka ah, haddii loo baahdo. Si aad ula socodsiiso dhammaan isbeddelada iyo koritaanka qiimeynta bogga, warbixinno faahfaahsan oo ku saabsan xaaladda boggaaga mashiinka raadinta ayaa la gaarsiiyey. Hawshani waxay soconeysaa saacadda, sidaa darteed suuragal ma ahan in la seego daqiiqad kasta oo muhiim ah.
Mararka qaarkood waxay u dhacdaa in sabab kasta awgeed inaad joojiso dallacsiinta SEO. Xaaladdan oo kale, Google sida caadiga ah waxay ka baabi'isaa dhammaan xiriiriyeyaasha xiriiriyeyaasha kaydka macluumaadka waqti kadib. Darajooyinku waxay si dabiici ah u bilaabi doonaan inay si deg deg ah u dhacaan, laakiin ha ka walwalin si adag, waxay ku sii nagaanayaan meel gaar ah si kastaba. Mowqifkani wuxuu si aad ah uga sarrayn doonaa kii kan ka horreeyay ololaha FullSEO. Guud ahaan, waxkastoo SEO ah-kobcinta waa shaqsi, sidaa darteed way adag tahay in la go'aamiyo qiimaha ololaha FullSEO ka hor inta khubarada SEO ay fiirin boggaaga si faahfaahsan.
Waa maxay Falanqaynta
Semalt waxay sidoo kale bixisaa kobcinta SEO-ka iyada oo loo marayo falanqaynta. Si kale haddii loo dhigo, waa adeeg loogu talagalay xisaab-hubinta faahfaahsan ee websaydhka iyadoo la abuurayo warbixin faahfaahsan. Xusuusnow ka sokow xisaabtanka barta bartilmaameedka, waxay falanqeeysaa goobaha tartamayaasha, aruurinta erey-fureyaal si kor loogu qaado udub-dhexaadka websaydhka websaydhka, iyo sidoo kale dhisidda darajooyin magacyada tartamaya. Falanqaynta waxay bixisaa waxyaabaha soo socda:
soo jeedinta ereyga furaha;
Uruurinta xogta lafagurida waxay bilaabaneysaa isla marka aad iska diiwaan geliso degelkeena. Tani waxay dhacdaa si otomaatig ah, markasta oo aad dhammaystirto aruurinta macluumaadkaaga, waxaad helaysaa warbixin si cad u soo bandhigaysa jagada dhabta ah ee websaydhkaaga. Goobaha tartamaya sidoo kale waa la lafaguray, sidoo kale waxaad heleysaa dhammaan macluumaadka ku saabsan booskooda. Heerarka SEO waa la tixgeliyaa inta la abuurayo qaab dhismeedka goobta, marka waxaad heleysaa isbeddelo cusub oo ku saabsan qaabeyntaada haddii aad u baahatid.
Haddii aad hore u leedahay koonto ansax ah, waxaad ku dari kartaa qaddar kasta oo bogg ah golahaaga shakhsi ahaaneed. Dhammaan goobaha ayaa si isku mid ah loo falanqayn doonaa. Falanqaynta bilowga ah waxay muujineysaa ereyada furaha ah ee la adeegsado. Nidaamku wuxuu doortaa kaliya laxiriira ereyada muhiimka ah. Taasi waa, dhammaan ereyada waxay ku yeelan doonaan saameyn wax ku ool ah koritaanka imaanshaha goobta. Waad baabi'in kartaa ama ku dari kartaa ereyada kale ee furaha ah ikhtiyaarkaaga.
Habboonaanta ayaa ah inaan falanqeyno goobta oo aan la soconno horumarkiisa saacadda oo dhan. Waa muhiim inaad aruuriso macluumaadka ku saabsan tartamayaashaada. Had iyo jeer waad la socotaa waxkasta oo ka socda goobahooda, iyo Falanqaynta ayaa kuu sheegaysa tallaabada loo baahan yahay in la qaado si looga badiyo tartamayaasha mashiinka raadinta. Waad adeegsan kartaa Codsiga Barnaamijka Borograamka Programming Interface (API), tan ayaa aad looga doorbidayaa adeegsadayaasha maxaa yeelay xogtu si otomaatig ah ayey u wada shaqeynayaan, iyagoo u oggolaanaya inaad isha ku hayso wixii cusboonaysiin ah. Waxaa jira saddex xirmooyin tarbiyad oo laga heli karo qaybtan adeegyada:
PROFESSIONAL - $ 99 bishii (1 000 ereyo muhiim ah, 10 mashruuc, taariikhda 1 sano taariikhda);
Horumarinta Websaydhka, Semalt wuxuu soo jeedinayaa xal dhameystiran oo tilmaamaysa horumar buuxa ee degelkasta oo ganacsi, iyo naqshadaynta qaybaha ay ka kooban tahay:
dhexgalka barnaamijyada dhinac saddexaad;
Nidaamka Maareynta Maaddada;
modules-yada gaarka ah ee ganacsiga;
Waxyaabaha waajib ku ah qorshayaasha suuq gaynta la hirgaliyay inta la bilaabayo mashaariicda ganacsi ee waaweyn ee internetka waa muuqaal soo koobaya nuxurka iyo faa'iidooyinka shirkadda cusub. Iyada oo qayb ka ah "Soo-saarida Fiidiyowga Wax-soo-saarka ee" Semalt wuxuu soo jeedinayaa laba dariiqo oo loo abuuro fiidiyooyinkan oo kale:
go'aan shaqsiyeed (qiimaha waxaa loo xisaabiyaa si gooni gooni ah).
U gudubka hawsha lacag bixinta waxaa laga sameeyay sharraxaadaha xirmooyinka taayirrada, adoo gujinaya badhanka "Subscribe" badhanka. Iibsashada xirmada jumlada ah waxaa lagu soo saari karaa lacag kasta oo qaran. Xulashada wareejiyaha wuxuu ku yaal qaybta sare ee foomka bixinta.
Wixii intaas ka dambeeya oo dhan, way adag tahay in shaki laga muujiyo waxqabadka SEO optimization by hababka Semalt. Laga yaabee inay muuqatay su’aalo dheeri ah maxaa yeelay maqaalku ma dabooli karo dhammaan waxayaabaha halista ah ee noocaas ah. Sidaa daraadeed, waxaa fiican inaad la xiriirto shirkadda iyada oo aan dib loo dhigin. Mar alla markii Semalt uu kaa maqlo, dhaqso ayaad hodan u noqon doontaa. Waan ku sugeynaa!